Vaovao - Mochi
①, fisehoana ambony. Ny fonosana ny vokatra 20 taona lasa izay dia tsy azo ampitahaina amin'ny ankehitriny. Ireo mpanjifa ankehitriny dia miha mitaky bebe kokoa amin'ny kalitaon'ny vokatra, ny famolavolana fonosana ary ny fanandramana vokatra. Voalohany indrindra, takiana ny hanitry ny mochi aorian'ny fisokafana, malefaka ny fidirana, mitombina ny firafitry ny orinasa, ary fehezina fatratra ny famokarana. Amin'ny fanarahana ny famokarana mahia, ny fanaovana asa tanana, ary ny fanatratrarana ny vokatra farany, no ahafahana manana toerana malalaka eny an-tsena.
• ②, tahan'ny vidin'ny vokatra avo. Tsy ny kalitao ihany no azo ampidinina, fa ny fepetra takiana kosa dia miha avo hatrany hatrany, fa tsy midika kosa hoe ny kalitao avo sy ny vidiny ambony dia mitovy na ambany noho ny vokatra mifaninana.
• ③, fisedrana ary fanandramana haingana ary fandaniam-bola mora ary fanandramana haingana sy hadisoana. Tsy ny vokatra vaovao rehetra no hahomby, ary ny tsiro, ny famolavolana fonosana ary ny foto-kevitra momba ny marketing dia tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa. Ilaina ny fifantohana amin'ny famakafakana angona sy ny hetahetan'ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny lalina sy amin'ny antsipiriany. Ny tadiavin'ny mpanjifa dia miasa mafy amin'io lafiny io izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fangatahana fangatahana ihany no ahafahana maneho taratra ny sandan'ny vokatra ary afa-po ny mpanjifa.
• ④. Ny marika dia mampiroborobo ny fampiroboroboana. Entin'ny marika, ary entin'ny kolontsaina amin'ny fitantanana, izahay dia miezaka manangana vondrom-piarahamonina miaraka amin'ny ho avy iraisana amin'ireo mpamatsy anay.
• ⑤. Ny foto-kevitry ny fitantanana ny marika dia mifantoka akaiky amin'ireo singa telo lehibe amin'ny fanamoriana, sakafo tsara ary sanda tsara, ary sandan'ny vola. Ny traikefa amin'ny vokatra, ny fikatsahana akora voajanahary, tsy misy fanampiny na tsy misy, mba hihaona amin'ny filan'ny vondron'olona samihafa.
Fotoana fandefasana: Apr-25-2021